Warar - Maxay yihiin faa'iidooyinka loo adeegsado qalab kala duwan mashiinada baaxadda weyn
Maxay yihiin faa'iidooyinka loo adeegsado qalab kala duwan mashiinada baaxadda weyn
Si loo buuxiyo shuruudaha farsamo ee macaamiisheeda inta lagu guda jiro hawlgalka mashiinada baaxada weyn, qalabka shaqada waa in si hufan loogu hagaajiyaa meel go'an qalabka mashiinka inta la isticmaalayo. Si looga fogaado qalabka shaqada inta lagu jiro howsha makiinada. Marka barakicintu ay saameeyaan xoogagga dibedda sida xoog goynta iyo culeyska cufka, haysa gaar ah waa in loo adeegsadaa in lagu xakameeyo qeybta shaqada si aan loo beddelin meeshuu ku yaal. Maxay yihiin faa'iidooyinka loo adeegsado qalab kala duwan ee mashiinada ballaaran?
Faa'iidooyinka isticmaalka Q235A (birta A3) ee mashiinada ballaaran
Faa'iidada ugu weyn ee hawlgallada baaxadda weyn ee mashiinnada ayaa ah in ay leedahay caag sare, adkaansho iyo waxqabadka alxanka heer cayiman. Badeecada oo dhan waxay leedahay waxqabadka shaabbadda iyo wax qabad qaboojinta qabow. Waxaa badanaa loo isticmaalaa shuruudaha marka la isticmaalo. Qaybaha farsamada hoose iyo qaybaha qaabdhismeed ee alxanka leh, sida ulaha lagu xidho, ulaha isku xidha, biinanka, fallaadhaha, boolal, lowska, qaansooyinka, saldhigyada, iwm.
Faa'iidooyinka isticmaalka 40Cr ee mashiinada baaxadda weyn
Qalabaynta baaxadda weyn waxay lahaan doontaa sifooyin farsamo oo dhammaystiran oo aad u wanaagsan, qallafsanaanta saameynta heerkulka oo hooseeya, xasaasiyad hooseysa iyo adkeysi wanaagsan illaa heer gaar ah ka dib deminta iyo xanaaqa. Awood sare ayaa la heli karaa marka saliida la qaboojiyo, qaybona waxay u nugul yihiin dildilaaca marka biyaha la qaboojiyo. Dabeecadda ama daminta iyo xanaaqa ka dib, farsamaynta ayaa wanaagsan, laakiin dheelitirnaanta ma fiicna oo dildilaacyadu way fududahay inay dhacaan.
Marka mashiinka la isticmaalo, waxaa badanaa loo isticmaalaa xawaaraha sare ee dhaqaaqa qaybaha farsamada geedi socodka wax soo saarka kadib daminta iyo xanaaqa, sida qalabka qalabka mashiinka, fallaadhihii, dixiriga, iwm. loo isticmaalaa in lagu soo saaro qaybo leh adkeyn sare iyo xirnaasho iska caabin ah, sida geerka, fallaadhaha, dunmiiqa, crankshafts, dunmiiqa, gacmo, biinanka, ulaha isku xidha, iwm.
Ka dib deminta iyo kuleylka heerkulka dhexdhexaadka ah, waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro qaybo culus oo xawaare dhexdhexaad ah, sida mashiinnada mashiinka saliidda lagu duubo, kuwa wax lagu dhejiyo, qalabka wax lagu duubo, iwm. soosaar shaqo culus, saameyn hooseeya, qaybo makaaniko u adkeysanaya, sida dirxi, dunmiiqa, iyo fallaadho. Goobta kaarboon-ka-samaynta, qaybaha gudbinta oo leh cabbirro waaweyn iyo qallafsanaanta saameynta heer-kulkeedu hooseeyo, sida fallaadhaha, geerka, iwm.
Faa'iidada isticmaalka 45 # ee mashiinada baaxada weyn
45 # waa bir qaabdhismeed tayo sare leh oo kaarboon ah, waana kan hadda inta badan loo isticmaalo kaarboon dhexdhexaad ah oo bakhtiiyey oo bir kulul leh.
Geedi socodka hawlgalka, wuxuu yeelan doonaa waxyaabo farsamo oo dhammaystiran oo aad u wanaagsan. Waxay leedahay adkaansho hoose inta lagu jiro isticmaalka waxayna u nugushahay dildilaaca inta lagu jiro biyo yareynta. Qaybaha alxanka leh waxay u baahan yihiin in la diiriyo kahor alxanka ka hor iyo alxanka kadib alxanka.
Ugu badnaan waxaa loo isticmaalaa: soo saarida qaybo dhaqdhaqaaq farsamo oo xoog badan leh, sida qalabka wax lagu rakibo, bistooladaha, fallaadhihii, geerka, rakhiisyada, dixiriga, iwm.